Fiatrehana ny fanadinana: hanao CEPE sy BEPC ho azy ny sekoly tsy miankina | NewsMada
Fiatrehana ny fanadinana: hanao CEPE sy BEPC ho azy ny sekoly tsy miankina
Tao anatin’ny taom-pianarana roa nifanesy farany, tsy nampiantso na naka hevitra niaraka tamin’ny Vovonan’ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara intsony ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, araka ny fanazavan’ny sekretera jeneralin’ny Plateforme des directions nationales des écoles privés de Madagascar sady filohan’ny delegation nationale des écoles libres de Madagascar (DNELM), Rakotoniaina Justin, omaly.
Hatramin’izay, arreté iray ihany no mamaritra ny tetiandron’ny taom-pianarana hodiavina sy ny tetiandron’ny fanadinam-panjakana roa voalohany (CEPE sy BEPC). Ho an’ny taom-pianarana 2021-2022, tsy mbola nivoaka ny tetiandron’ny fanadinana raha tokony ho fantatra ny fiandohan’ny taom-pianarana izany ahafahana miroso amin’ny lamina samihafa. Sahirana noho izany ireo mpitantana sekoly tsy miankina satria miankina amin’izay tetiandrom-panadinana izay ny asa samihafa ; fanombohan’ny famerenana, fisantarana ny fikarakarana ny antontan-taratasin’ny mpiadina…
“Efa nangataka fihaonana tamin’ny minisitera mpiahy ny mpikambana ao anatin’ny plateforme, ahitana direction nationale 10 fa tsy nahazo valiny hatreto”, hoy hatrany ny fanehoan-kevitr’ity tomponandraikitry ny fanabeazana ity. Votery manao fanomanana izahay sy mametraka tanjona ho an’ity taom-pianarana ity, indrindra ho an’ny kilasy hiatrika ny fanadinam-panjakana ka hanatanteraka fanadinana iraisana ho an’ny CEPE sy BEPC ny sekoly tsy miankina rehetra manerana ny Nosy. Manodidina ny fiafaran’ny volana jona na ny fiandohan’ny volana jolay no hanatanterahana izany fanadinana iraisan’ny tsy miankina izany. Direction nationale sivy amin’ny 10 mpikambana no miombon-kevitra amin’ny fanatanterahana fanadinana iraisan’ny sekoly tsy miankina. Direction efatra tsy miankina amin’ny finoana ary ny enina ambiny miankina amin’ny finoana avokoa.
Hiverina an-dakilasy ny sekoly tsy miankina
Momba ny fiverenan’ny fampianarana amin’ny alatsinainy 17 janoary ho avy izao, tsy misy fisalasalana na fiandrasana toromarika vaovao avy amin’ny fitondrana intsony fa roso ny fampianarana. Nohamafisiny fa nanantena izy ireo fa hisy fandraisana andraikitra avy amin’ny fanjakana ny antony nanemorana ny fidirana, nefa hatramin’izao tsy izay no nitranga. Ny ampahan’ny sekoly tsy miankina sasany aza nanohy ny fampianarana toy ny mahazatra ihany, tamin’ity herinandro ity.